कोरोनाको उपचारमा ज्यानको बाजी लगाएका छौं, पुरस्कार मोसो? – AayoMail
कोरोनाको उपचारमा ज्यानको बाजी लगाएका छौं, पुरस्कार मोसो?
आयाेमेल संवाददाता २०७७ साउन २६ गते १८:५९
पिसिआर रिपोर्ट देखाउनुस् भन्दै गेटमा सोध्ने र छैन भनेपछि छिर्न नदिने खालका काम भएका छन्। जसका कारण तीनदेखि चारजनाको मृत्यु पनि भयो। यस्तो समस्या भएपछि स्थानीय अलि आक्रोशित भएका हुनसक्छन्।
यस्तो विषम परिस्थितिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार हुनु तथा अस्पताल तोडफोड नै हुनु निन्दनीय काम हो। कुनै व्यक्तिगत काम हामीले गरेको होइन। नागरिकका सेवाका लागि जुटिरहेका हौं।
सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले ज्यान जोखिममा राखेर सेवा सुचारू गरेका हुन्। दिनरात–घर परिवार नभनी आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर, आफू स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुन्छु भन्ने मनमा हुँदाहुँदै अगाडि बढेको बेलामा दुर्व्यवहार हुनुपर्दा मनमा कस्तो लाग्छ होला?
मनोबल नै घटेपछि को काम गर्न तयार हुन्छन् र! यस्तो परिस्थितिमा काम गर्न सकिँदैन भनेर ३ सय स्वास्थ्यकर्मीले राजीनामा नै दिन्छौं भनेर निवेदन दिएका छन्।
अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा, चिकित्सकमाथि भन्दा पनि यो त सम्पूर्ण अस्पतालमाथिको प्रहार हो।
चिकित्सकको गाडीमा तोडफोड गर्नु, आकस्मिक कक्षमा गएर शिशा फुटाउनु, कर्मचारीलाई हातपात गर्नुजस्ता घटनाले अप्रिय अवस्था ल्याएको संकेत भइरहेको छ।
यस्तो घटना कहिले पनि नहोस्। स्वास्थ्यकर्मी यस्ता कुरा सम्झन चाहन्नन्।
कोरोना संक्रमण तथा मृत्युदरका विषयलाई लिएर निजी संस्थाका केही व्यक्तिसँग हिजो छलफल गर्न बोलाएका थियौं। जुन छलफलमा नेपाल प्रहरीका एसपी पनि हुनुहुन्थ्यो। कुराकानी चलिरहेको थियो। एसपी साबलाई खबर आएपछि उहाँ कुदेर जानुभयो। हिजो दिउँसो स्थानीयको समूह आयो, जबरजस्ती अस्पताल भित्र छिर्‌यो, आकस्मिक कक्ष तोडफोड गरियो।
उहाँहरू नभएको भए हिजो घटनाको मोड अर्कै हुनसक्थ्यो।
(आयोमेलका पुष्पराज चौलागाईंसँगको कुराकानीमा आधारित)